I-Snapdragon 670, i-SD710 esandula ukukhutshwa engenamandla kangako I-Androidsis
I-Qualcomm isandula ukubhengeza iprosesa yayo entsha, i-Snapdragon 670. Eli lungu litsha kwikhathalogu yalo lijolise kuluhlu oluphakathi, uluhlu apho Snapdragon 710 esanda kukhutshwa.
Njengoko bekulindelekile, chip ilungiselelwe ukusebenza I-Android 9.0 Pie, Inkqubo entsha yokusebenza evela kuGoogle, ifemu yaseMelika. Ukongeza, enkosi kumandla ayo asibhozo anamandla, ngokufanayo nalawo afunyenwe kwi-SD710 kodwa kwisantya esisezantsi, iya kuphawulwa, ngaphezulu kwayo nayiphi na into, ngokuphunyezwa kwiifowuni ezizayo. phakathi kuluhlu.
I-Snapdragon 670 ayifani kakhulu kwi-SD710, xa kufikwa kuma-specs. Njengoko besesitshilo, Le SoC iza ifakwe izixhobo ezisibhozo (4x Kyro 360 kwi-2.2GHz + 6x Kyro 360 kwi-1.7GHz) kwaye yenziwa nge-10 nanometers LPP. Ixhotywe nge-1KB kunye ne-64KB L32 cache, nganye yeqela, i-2KB kunye ne-256KB L128 cache, kunye noqwalaselo olufanayo, kunye ne-3MB L1 cache.
I-Snapdragon 670 ine-Adreno 615 GPU, engenamandla kangako kune-Adreno 616 ye-SD710. Ikwaxhasa isisombululo se-FullHD + ubukhulu becala, ngokungafaniyo ne-710, enokuxhasa ukufikelela kwi-QuadHD + isisombululo. Ngaphandle koko, yabelana nge-chip enye ye-DSP Hexagon 685, egxile ekuqhubeni imisebenzi esekwe kubukrelekrele bokusebenza, kunye ne-ISP Spectra 250, yiyo loo nto inokuxhasa ikhamera enye ukuya kuthi ga kwi-25MP kunye neekhamera ezimbini ze-16MP, kunye nokurekhoda isisombululo sevidiyo ye-4K kwi-30fps.
Kwelinye icala, ngokubhekisele kunxibelelwano, umenzi utshintshe imodem yeX15 LTE ukusuka kwi-SD710 ukuya kwimodem yeX12 LTE ecothayo. Ke ngoko, isantya esiphezulu sokukhuphela siyehla siye kwi-600Mbps kunye nesantya esiphezulu sokulayisha kwi-150Mbps. Okwangoku, i-Snapdragon 670 ixhasa i-Dual SIM Dual VoLTE (DSDV) kunye neCharge ekhawulezayo ye-4 + yokutshaja ngokukhawuleza.
Ukushwankathela, i-Snapdragon 670 yi-Snapdragon 710 engenamandla kangako. Ine-CPU esezantsi enewotshi, iGPU engenamandla kangako, kunye nemodem ecothayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 670: I-SoC entsha ye-SoC ejolise kwinqanaba eliphakathi